AKHRISO:- Waan waantii laga dhex-waday Farmaajo & Rooble oo hakad gashay | Allgalgaduud.Com
Home Dhacdooyinka Todobaadka AKHRISO:- Waan waantii laga dhex-waday Farmaajo & Rooble oo hakad gashay
AKHRISO:- Waan waantii laga dhex-waday Farmaajo & Rooble oo hakad gashay
Maalmihii la soo dhaafay Xarunta Madaxtooyada waxaa ka socday kulamo lagu dhex-dhexaadinayay Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble.
Kulamada oo ay horkacayeen Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal, Madaxweynaha Galmudug Qoor Qoor, Wasiirka Waxbarashada & Wasiir kuxigeenka Warfaafinta, waxaana warar soo baxaya ay sheegayaan in kulamada ay hakad galeen.
Kulamadii ugu dambeeyay ee dhacay ayaa waxaa wararka aan helnay ay sheegayaan in qodobada qaar la iska fahmay, balse qodobka kaliya ee aad u adkaaday uu yahay in dhanka xafiiska Madaxweynaha ay dalbanayaan in Wasiirka Amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur Wasaarad kale loo wareejiyo, balse dhinaca Ra’iisul Wasaaraha ay ku adkaatay.
Wararka aan ka heleyno Madaxtooyada ayaa waxaa ay sheegayaan in saacadaha soo aocda ay dib u billaaban doonaan kulamada dhex-dhexaadinta ah, isla markaana ay kulmi doonaan Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha.
AKHRISO:- Xilliga la qabanayo doorashada Xubnaha Aqalka Sare uga harsan Jubbaland oo la shaaciyay
AKHRISO:- DFS oo sheegtay in ay ka hortageyso Shirkaddo Kalluumeysi Sharci darro ah ka wadaan Biyaha Somalia
AKHRISO:- Soomaalida kunool UK oo halis soo wajahday